Nke a na-ekwu: SEO Kwadoro na Marketing Digital Integrada
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịntanetị na ịntanetị, ọ ga-achọ ka ị na-achọ ịntanetị. N'ihi ya, ọ bụrụ na ndị nleta visitarían su sitio web solo por error o pura curiosidad. Ị na-eme ihe ọ bụla site na ị na-agụnye ihe ọmụma na ozi ndị ọzọ na-akọwa ozi ọma na ndị ahịa n'ihi na ha. Información yiri nke bụ isi ihe na-eme ka a na-agwa ndị mmadụ ihe ọmụma na-enyere ha aka ịbanye na web del negocio. Ị nwere ike ịchọta ozi ndị kasị mma ozi na-ezigara ndị mmadụ na ndị ahịa nwere ike ịbanye na ha.
Internet tiene ruru 13 miles millones nke búsquedas mensuales. Ọ bụrụ na ọ bụ Search Engine Optimization Search (SEO), ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe nchọgharị weebụ na weebụ, ị ga-achọpụta na ị na-achọpụta ihe dị iche iche nke ahịa na-eme ka ọ dị mfe.
A na-arụ ọrụ site na SEO, ndị ọkachamara na-enyere ndị ahịa aka ka ha na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta ndị na-elekọta ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ. Esto se puede lograr cuando ile ama na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-arụ ọrụ nke na-abaghị uru. Gbasara anyị ego ma na-akwụ ụgwọ ọ bụla ego.
Andrew Dyhan, el Gerente de Éxito del Cliente de Ọkachamara , a na-emepụta ahịa nke ahịa ahịa dijitalụ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịgide adịgide.
SEO hace nke moto nke motos nke ọ bụla na-emepụta, na-eme ka ihe ọ bụla na-ewu ewu na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ihe ọ bụla na-arụ ọrụ.
1. Nke a na-ekwu okwu:
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla dị na peeji nke weebụ, ọ ga-eme ka ọ dị mma.
Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla na-eme ihe na HTML, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị iche iche.
3. Gbasara mkpokọta weebụ:
Nke a na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ndị dị mkpa na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla.
4. Ndị na-abata n'ime ụlọ:
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ na-eme.
Nkọwa nke ozi ọma, nke a na-emepụta, na-eme ka ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ SEO.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ị na-arụ ọrụ nke software dị ka software na-eme ka ị na-enweta ihe ọmụma na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na ozi ịntanetị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-egosi na ọ bụrụ na ị na-eme ihe na Internet, ọ bụrụ na ị na-edebanye aha gị na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla, descargados y visitados para un procesamiento más rápido por parte de los motores de búsqueda.
Onye Spider na-edebere ihe ọ bụla na-agbakwunye ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe ọmụma na njikọ weebụ na web site na web site na navega el motor de búsqueda. Ihe ndị ọzọ na-eme ka ị na-enweta ihe ọ bụla ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. El SEO na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nwere ike ịbanye na web site.
Algoritmos del moto de búsqueda
Los algorithmos del moto de búsqueda consisten en conjuntos de fórmulas daicas y reglas que definen la relevancia de una web web. Tienen la capacidad de identifier la page nke mbụ na ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla na-eme ka ọ dị mkpa.
The etapa final del proceso de nkesqueda nke web page na-eme ka SEO bụ usoro nke na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe ndị na-eme ka ha na-emetụta ihe ndị dị mkpa. N'ikpeazụ, el motor de búsqueda na-enweta akwụkwọ ndekọ na coinciden con las palabras clave y la cadena utilizada.
Onye ọ bụla nke SEO, dị ka nke a, na-eme ka ohere nke ozi nke weebụ dị iche iche na-eleba anya na nke a na-eme ka ọ bụrụ na a motor de búsqueda. A na-ere ahịa ahịa SEO bụ ndị na-emepụta ihe na-eme ka a mara na nke na-eme ka ndị mmadụ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ na ha na-emepụta ihe Source .